OLIPOST.COM – Page2– Rohit Oli's personal blog.
​भर्खरै बर्ष २०७२ हामीबाट बिदा भएर गएको छ । गएको बर्ष देशमा थुप्रै उताव चढावहरु आए । हामी सबैलाई थाहा छ, बर्षको सुरुवात मै देशले दर्दनाक भुकम्पको सामना गर्नु पर्यो, जुन यो शताब्दी कै ठूलो र दु:खद घटना हुन सक्छ । उसो त असोजमा नेपालीहरुको दशकौंदेखिको सपना – जनताद्वारा निर्मित ऐतिहासिक नेपालको संविधान जारी भयो । तर त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप असन्तुष्ट पक्षहरुले पछि आन्दोलनको घोषणा गरे र कैयौंले ज्यान समेत गुमाउन पर्यो । त्यसपछि, देशले अमानवीय किसिमको नाकाबन्दी समेत भोग्नु पर्यो । यावत घटनाक्रमका बिच गएको बर्ष सबै नेपालीहरुको लागि पिडादायी बर्षको रुपमा रह्यो । स्वाभाविकरुपमा मेरो लागि पनि बिर्सनलायक बर्षको रुपमा हुने नै भयो । कामना गरौं बि.सं. २०७३ को बर्ष त्यस्तो नहोस् ।
नयाँ बर्ष सुरु हुँदै गर्दा र पुरानो बर्षले बिदा लिदै गर्दा अधिकांश ब्यक्तिले आफ्ना बितेका घटानाक्रमहरुलाई समिक्षा गर्दै भावी योजनाहरु कोर्ने गर्छन् । तर, जुन मेरो लागि हालसम्म नौलो विषय रहदै आएको छ । यसपटक पनि म सोहि प्रवृत्तिबाट अघि बढ्ने दुश्प्रयास गर्दैछु । तर, कम्तीमा यो असन्तुष्टिलाई यसपटक बिचारको रुपमा तपाईं माझ पस्केर मन शान्त पार्ने कोसिससम्म गर्दैछु ।
हुन त मेरो जीवनमा गएको बर्ष कुनै उल्लेखनीय (सुखद र दु:खद दुबै) कुरा भएनन् । भुकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रताडित जीवन गुजार्ने म मात्र नभइ म भन्दा पनि बढी पिडा भोग्ने ती पीडित नेपालीहरु साक्षी छन् । तसर्थ, समग्रमा भन्नुपर्दा गएको बर्ष कुनै उल्लेख्य प्रगति बिना नै नेपालीहरुको पिडामा सहानुभूति प्रकट गर्दैमा दिनहरु बिते । जे जस्तो भएपनि बितेका कुरा बितिनै सके, ती सक्कीगए ।
अबको महत्वपूर्ण कुरो भनेको – यो नयाँ बर्ष आफुलाई कसरी अगाडि बढाउने; कस्ता योजानाहरु बनाउने; ब्यक्ति, परिवार, समाज र सम्पुर्ण राष्ट्रको उन्नतिको बाटो के हुने भन्ने नै हो । समाज र राष्ट्रको लागि हामी जस्ताले योगदान त के नै दिन सकिन्थ्यो र तर कम्तिमा आफ्नो र परिवारको भविश्यको लागि चिन्तन मननका साथ स्पष्ट योजना बनाई अघि बढ्ने सहि मौका हुन सक्छ- यो नयाँ बर्षको सुरुवात । हुन त यतिसम्मको ज्ञान र चेतना हामी सबैमा छ, तर अब यसलाई व्यबहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । ब्यक्तिगतरुपमा भन्ने हो भने म यस्ता कुरामा सधै पछि नै रहे । कहिल्यै पनि नयाँ बर्षमा नयाँ तरिकाले सोच्ने र अगाडि बढ्ने प्रयास गरिएन । नयाँ बर्षहरु आए गए तर म आफुलाई पुरानैरुपमा मात्र पाउने गर्छु । यस बर्ष पनि सोही क्रमले निरन्तरता पाउने यथेष्ट संभावना हुदाँहुदै पनि यसको क्रमभंगतामा अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक भैसकेको महसुससम्म गरेको छु । आशा गरौं यो नयाँ बर्षले मलाई सत्बुद्धि प्रदान गरोस् ।
तपाईं पनि कम्तिमा नयाँ बर्षमा एउटा नयाँ गर्ने कोसिस मात्र भएनी गर्नु होला । “हामीले नगरे कसले गर्ने? अहिले नगरे कहिले गर्ने?” नयाँ बर्ष २०७३ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!!!
April 13, 2016 October 27, 2016 Leaveacomment